FEIYUTECH Vlog पकेट २ - जिमल समीक्षा - स्मार्टमे
मलाई फोटोग्राफीको बारेमा धेरै थाहा छैन, तर मैले समीक्षा लेख्न शुरू गरें र केहि अलि रेकर्ड गर्न थालेपछि मलाई यस्तो लाग्यो कि मलाई फोनको सामान्य स्थितिमा रहन र थरथरीएको हातको प्रभाव थोरै कम गर्न मबाट केहि चाहिएको थियो। मैले केहि समय खोजें र अन्तमा FEIYUTECH Vlog Pकेट2gimbal मा दौडें। त्यसैले मैले यो सही उपकरण हो कि होइन भनेर जाँच गर्ने निर्णय गरें।
यो मेरो जिमलबारको पहिलो साहसिक कार्य हो। म एक मांग फोटोग्राफर होईन, तर एकै क्षणमा म तपाईंलाई बताउनेछु कि यसले कसरी काम गर्दै थियो FEIYUTECH भ्लग पकेट २।
हामी बाकसमा के फेला पार्नेछौं FEIYUTECH Vlog पकेट २?
बाकस खोले पछि, हामी हेर्नेछौं:
म्यानुअल (द्रुत सुरू मार्गनिर्देशन) धेरै भाषाहरूमा - कुनै पोलिश छैन;
USB लाई USB - C केबल;
यो धेरै जस्तो देखिँदैन। यद्यपि म जस्तो साधारण मानिसका लागि यी तत्वहरू पर्याप्त भन्दा बढी थिए।
FEIYUTECH Vlog पकेट २ को प्राविधिक प्यारामिटरहरू हेरौं:
मोडेल: FeiyuTech Vlog पकेट 2
सामग्री: पीसी, PA6
टिल्ट: १165 ° (अक्ष रोटेशन दायरा)
रोल: 323२XNUMX ax (अक्ष रोटेशन दायरा)
पान: 330० ax (अक्ष रोटेशन दायरा)
उल्टो जिमबलको आयाम: २.24,8..9,4 x .6,4 ..XNUMX x .XNUMX..XNUMX सेन्टीमिटर
तह जिमबल आयाम: १.14,6..11,1 x ११.१ x 5,8 सेमी
तौल: २272२ g (सामान बिना)
उचाल्ने क्षमता: २ g० g
माउन्ट: १/1 ″ महिला तिपाई
चार्ज पोर्ट: USB सी
बिजुली आपूर्ति: बिल्ट-इन ब्याट्री (.7.4..1300 V / १ 9.62०० एमएएच / .XNUMX ..XNUMX२ WH)
एकल चार्जमा काम गर्ने समय: hours घण्टासम्म (१ g० g को लोडसहित)
ब्याट्री चार्ज समय: १. 1,5 घण्टा (VV / २A चार्जरको लागि - द्रुत चार्जिंग निषेधित छ)
अनुकूलता: २ g० ग्राम सम्मका वजन र to१ देखि 250 mm मिलिमिटर चौडाइका स्मार्टफोनहरू
अनुप्रयोग: एन्ड्रोइड (.6.0.०+) र आईओएस (.9.0 .०+) को लागी "Feiyu अन"
तपाईंलाई सम्भवतः पहिले नै थाहा छ, जिमबलहरू यस तथ्यले चित्रित गर्दछ कि हामी एक हातले सेटि withहरूमार्फत थोरै खेल्न सक्छौं। मैले स्वीकार गर्नै पर्दछ कि यस उपकरणसँग आरामदायक बटनहरू छन् जुन यसलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो बनाउँदछ। दाँया पट्टि, जिमबलसँग स्टार्ट र शटडाउन बटन र चार्ज पोर्ट छ।
त्यहाँ अगाडि butt बटनहरू छन्।
कार्यहरू (M) परिवर्तन गर्न प्रयोग गरिएको बटन,
जिमबल नियन्त्रण घुंडी।
बाँया पट्टि हामी जुम बटन फेला पार्दछौं। र पछाडि हामीसँग "ट्रिगर बटन" छ जसले तपाईंलाई जिमबललाई तल दिइएको स्थानमा लक गर्न अनुमति दिन्छ।
म्यानुअलमा तपाईले सबै भन्दा लोकप्रिय सेटिंग्स र कार्यहरू पाउनुहुनेछ जुन हामीले गर्न सक्दछौं। यसका लागि धन्यवाद, मैले फेला पारे कि जब हामी लामो समयसम्म फोटो बटन समात्छौं, हामी शटहरूको शृंखला लिनेछौं, र M बटन डबल थिच्नाले फोनको स्थिति तेर्सोबाट ठाडो र विपरितमा परिवर्तन हुनेछ।
अनुप्रयोगहरू जुन FEIYUTECH भ्लग पकेट २ का साथ काम गर्दछन्
निस्सन्देह, निर्माताको अनुप्रयोग प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ, किनकि यस ठाउँमा हामी उपकरणलाई उत्तम प्रयोग गर्ने छौं, तर गिमबलले फोनको प्रणाली अनुप्रयोग र अन्य अनुप्रयोगहरूसँग पनि काम गर्दछ। तपाईं रंग चयन गर्न सक्नुहुन्छ। निर्माताको अनुप्रयोगमा, मैले भनें, हामी बिभिन्न विकल्पहरूसँग खेल्न सक्दछौं।
ट्रिगर सेटिंग्स (2s, 5s, 10s),
फोटोहरू लिएको आवाज,
अगाडि र पछाडि क्यामेरा बीच स्विच,
फोटो मोड सेटिंग्स (द्रुत परिदृश्य, परिदृश्य, चौडा कोण, degree 360० डिग्री परिदृश्य आदि),
रेकर्डि recording मोड सेटिंग्स जस्तै ढिलो गति।
र सबै कुरा जुन हामी जिमल सेटिंग्स बाट आशा गर्न सक्छौं। सबै कार्यहरू तलको स्क्रीनशटहरूमा फेला पार्न सकिन्छ।
पहिलो प्रभाव र प्रयोग
म स्वीकार गर्दछु कि शुरुमा मलाई फोन सेटअप गर्न र जिमबलमा कसरी जडान गर्ने भन्ने बारेमा थोरै समस्या भयो। यो मेरो पहिलो जिम्बल हो, त्यसैले यो कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन।
जिमबल आफै नै धेरै सहज छ र यसलाई तपाईंको हातमा राम्रोसँग समात्छ। यो तुलनात्मक रूपमा हल्का छ, त्यसैले म जस्तो दुर्बल पनि असन्तुष्टि महसुस नगरीकन लामो समयसम्म यसको साथ काम गर्न सक्षम छ। बटनहरू पनि सहजै राखिन्छन् र तपाईंको हातको आकार जे भए पनि, दैनिक प्रयोगको साथ कुनै समस्या हुनेछैन।
बक्समा, अवश्य पनि, त्यहाँ फोनहरू कसरी राख्नुपर्दछ र सबै चीजहरू राम्रोसँग काम गर्नको लागि के गर्ने भनेर चिह्नहरू सहित स्टिकरहरू छन्। अवश्य पनि, मैले तिनीहरूबाट छुटकारा पाएँ, तर मलाई सम्झना छ कि फोन राख्दा, नमस्ते सधैं निर्माताको नामको साथ हुनुपर्दछ। जिमबल प्रयोग गर्नका लागि तपाईले फोनमा जडान गर्नु अघि यसलाई हटाउनुपर्दछ र प्राय: सबै गतिशील भागहरू अनलक गर्नुपर्दछ। हामीले रोक्ने एक मात्र चीज भनेको ट्राइपडको मुख्य अंश हो त्यसैले उपकरणहरू फोल्ड हुँदैन। यदि तपाईंले गर्नुहुन्न भने, सम्भावनाहरू यो हुन् तपाईंको उपकरण बिप हुनेछ र चिच्याउनुहोस् कि केही गलत भएको छ।
हामी ब्लुटुथ मार्फत FEIYUTECH Vlog Pocket2मा जडान गर्दछौं र केही पछि हामी फोटोहरू लिन र भिडियोहरू रेकर्ड गर्न सक्षम हुन्छौं। साथै अनुप्रयोग स्क्रिनमा हामी दुबै उपकरणहरूको लागि एक कनेक्शन ब्याज देख्दछौं। यसका लागि धन्यवाद, हामी नियन्त्रण गर्न सक्षम छौं कि केहि गल्तिले काटिएको छ कि छैन। तिपाई पनि काम गर्दछ। यो स्थिर छ र जब प्रयोग गरिन्छ, त्यहाँ फोन झर्ने बारेमा चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन। यो यस उपकरणको निश्चित प्लस हो।
मेरो विचारमा, यो कुनै पनि राम्रो उपकरण हो जो कोहीले आफ्नो फोनको साथ फोटो लिन्छ र भिडियो रेकर्ड गर्दछ। यसको ब्याट्री वास्तवमै लामो समय सम्म रहन्छ भन्ने तथ्यका कारणले तपाई यस उपकरणको साथ धेरै नै रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ (जबसम्म तपाईको फोनले यसलाई रोक्न सक्दैन;)। यदि आवश्यक छ भने, तपाईंसँग सँधै केहि पावरब्यान्क तपाईंसँग हुन सक्नुहुनेछ FEIYUTECH भ्लग पकेट २ को जीवन विस्तार गर्न जब आवश्यक हुन्छ। यद्यपि, मलाई लाग्दैन तपाईलाई यो आवश्यक पर्नेछ यदि तपाईंले यात्राभन्दा पहिले उपकरण चार्ज गर्नुभयो भने।
अर्को प्लस यो छ कि जिम्बल सजिलो छ। ब्याकप्याक वा पर्समा राख्न यो सजिलो छ। यसले धेरै ठाउँ लिदैन, र केबल र ट्राइपडलाई केसमा FEIYUTECH Vlog पकेट २ संग भण्डारण गर्न सकिन्छ। एकचोटि मलाई यसको बानी भए र यसको प्रयोग गर्ने तरिका सिकें, यसको साथ काम गर्न यो धेरै राम्रो भयो। यो केवल अफसोस छ कि यी दिन यात्रा कठिन छ। मलाई दया लागेको छ कि मसँग खेल्ने कुनै अवसरहरू छैनन्।
सबैमा, म यो उपकरणको सिफारिस गर्दछु। यो वास्तवमै उपयोगी छ र यदि तपाईंलाई आफ्नो स्मार्टफोनमा भिडियोहरू रेकर्ड गर्न केहि चाहिएमा, FEIYUTECH भ्लग पकेट २ राम्रो विकल्प हुनेछ।
मैले हेरें कि त्यहाँ गुलाबी संस्करण पनि छ र यो दुखद हो कि मँ, सबै चीज गुलाबीको फ्यान हुँदिन। तर हुनु हुँदैन - कालो पनि राम्रो छ!
FEIYUTECH Vlog पकेट २ यस अन्तर्गत निर्माताको वेबसाइटमा खरीद गर्न सकिन्छ लिंक
आईओएस १.14.5..XNUMX मा एप्पल नक्शाले भीड ठाउँहरू हटाउनेछ
स्याऊ, iOS, iOS 14.5, नक्शा, स्याउ नक्शा
टिम कुकको टोली लगातार कोरोनाभाइरस महामारीको बेला फोनको प्रयोगमा सुधार ल्याउने कार्यमा निरन्तर काम गरिरहेको छ। त्यस्ता प्रयासहरूको एक उदाहरण एक सुविधा हो जुन चाँडै नै एप्पल नक्सा अनुप्रयोगमा देखा पर्नेछ। विकास गर्न समय ...